Nairobi: Saacadihii ugu dambeeyay shirka, is-mariwaa iyo xog qabyo ah oo ka soo baxaysa nuxurka war-murtiyeedka. – Radio Daljir
Nairobi: Saacadihii ugu dambeeyay shirka, is-mariwaa iyo xog qabyo ah oo ka soo baxaysa nuxurka war-murtiyeedka.
Abriil 13, 2011 12:00 b 0
Nairobi, April 13 – Shirka wada-tashiga ee looga arrinsanayo masiirka Soomaaliya oo lagu wado in uu soo dhammaado saacadaha soo socda ayaa maraya meel adag, iyada oo ay dhinacyadu wali ku adkeeysanayaan mawaaqiftii ay soo jeediyeen shalay Talaadadii. Dhinaca kalena, waxa soo baxaya ififaafalaha qodobbada lagu wado in ay ka muuqdaan war-murtiyeedka shirkan.
Xog-haynta shirka iyo ka qayb-galayaasha ayaanan haba yaraatee si rasmiya u bixineeyn halka la isla marayo, waxase Daljir u suurta-gashay in ay la hadasho diblomaasi aad ugu dhow goolaaftanka iyo doodaha ka dhex-socda madasha shirka kaasoo noo caddeeyay in ayan wali muuqan in heshiis laga gaaray baaqa kama dambaynta ah ee la doonayo in lagu soo gunaanado shirka.
Barlmaanka oo difaacaya tallaabadiisa kororsiga.
Ergada barlamaanka federaalka KMG ah ee Soomaaliya ayaa iyadu ku dhaggan nuxurka documanti ay u soo gudbiyeen shirka, kaasoo sharaxaad ka bixinaya duruufaha kallifay in ay qaataan go’aankii saddexda sano ay xilka ku kororsadeen iyo qorshaha shaqo ee ay ku tallaabsan doonaan muddadaas ay kororsadeen. Tallaabooyinkaas ayaa lagu sheegay in ay ugu waawayn yihiin diyaarinta dastuurka federaalka iyo dib-u-habaynta barlamaanka ruuxiisa.
Puntland iyo Galmudug oo ka horyimid xilli-kororsiga.
Dhinacyada ayaa si isku mid ah arrintaas uga biyo diiddan. Wafdiga Galmudug ayaa soo jeediyay in lakala diro xubnaha barlamaanka inta ka horeeysa bisha August ee sannadkan 2011-ka. Arrintaa ayay ku sababeeyeen in inta badan xubnaha barlamaanku ka kooban yahay ay xildhibaano soo ahaayeen tan iyo dawladdii KGM ahayd ee lagu soo dhisay Carta sannadkii 2000. Waxa ay sheegeen in wixii xilligaa ka dambeeyay oo ay dalka soo mareen barllamaanno kala duwan ayan xubnahaas wax la taaban karo oo horumar ah ku soo kordhin wax ka qabashada dhibaatada ka taagan Soomaaliya, sidaa darteedna ayan wax macno ah sameeyneeyn in saddex sano oo hor leh loogu daro. Maamulka Galmudug ayaa isagu qaba in muddada yar ee hartay lagu soo dhiso barlamaan ka tiro yar kan hadda jira balse lagu soo xulo qaabka miisaanka qabaa’ilka.
Ergada Dowladda Puntland ayaa qodobbada ugu adag ee ay qaateen lagu sheegay in ay battaatanba diideen isku-dayada xilli-kororsiga, waxayna ku baaqeen in dib-u-habeeyn dag-dag ah lagu sameeyo barlamaanka, baddalkiisana la soo dhiso barlmaan tiro ahaan aad uga yar kan xilligan oo ah 570 xubnood.
Dhinacyada oo ka tashanaya nuqul soo jeedin ah.
Xilligan ayaa la sheegayaa in ay dhinacyadu si gaar-gaar ah u fadhiyaan kana doodayaan nuqul qabyo ah oo la doonayo in laga soo dhiraan-dhiriyo baaqa ama war-murtiyeedka kasoo bixi doona shirkan labada maalmood socoday. Xogta ay Daljir heshay, ayaa si kastaba ha ahaatee, muujinaysa in ay u badan tahay in war-murtiyeedku soo bixi karo barri khamiista galinka hore.
Daljir waxa sidoo kale u suura-gashay in ay wax ka ogaato nuxurka nuqulka laga xaajaysanayo xilligan kaasoo la moodo in uu meel dhexe isugu keenayo aragtida dhinacyada oo guud ahaan u kala qaybsan tan barlamaanka federaalka ah oo dhinac ah iyo dhinaca kale oo ay taagan yihiin maamullada iyo ururka Ahlu-sunnah.
Nuxurka soo jeedinta war-murtiyeedka.
Nuqulku waxa uu ku talinayaa xilli-kordhin aan la ogayn, balse ka yar saddexdii sano ee uu soo gudbiyay barlamaanku. Intaa waxaa dheer in nuqulku qeexayo shaqooyinka iyo waajibaadka laga doonayo in ay fuliyaan hay’adahaasi marka xilliga loo kordhiyo iyo waliba farsamadii lagu hubin lahaa in uu qorshahaasi shaqaynayo.
Waajibaadkaas ayaa waxa ugu muhiimsan in si ku-meel-gaar ah loo meel-mariyo dastuurka federaalka iyo in dib-u-habeeyn lagu sameeyo barlamaanka, taasoo tirada uu noqonayo ay ku caddaan doonto dastuurka la meel-marinayo. Waxa kaloo ka mida waajibaadkaas wax ka qabashada xaaladda ammaanka dalka iyo waliba diyaarinta doorashooyin qaran sida ku caddaan doonta dastuurka.
Sidoo kale, waxa uu nuqulku ku talinayaa in la sameeyo guddi dabagal ku sameeya fulinta qodobbada kaas oo uu hogaamin doono danjire Augustine Mahiga, wakiilka xoghayaha QM u qaabilsan arrimaha Soomaaliya oo ay dhinacyadu haatan martida u yihiin.
Muqdisho, Garoowe iyo Gaalkacyo?
Arinta kale ee la isku khilaafsan yahay kuna xusan soo jeedinta ayaa waxay tahay in kulanka ugu horeeya ee guddiga dabagalka lagu qabto Muqdisho, halka ay Puntland, Galmudug iyo Ahlsunah Wal-Jamaacah ay ku talinayaan in shirkan lagu qabto mid ahaan magaalooyinka Garoowe ama Gaalkacyo.
Daljir kala soco wararka ugu dambeeya ee shirka wada-tashiga arrimaha murugsan ee Soomaaliya.
Cabdullaahi Yusuf oo waayaha ku shabahay markii uu xilka ka tagay, beesha caalamkana ku tuhmay gumaysi.
Saddex qof oo gaajo iyo oon ugu dhintay abaaraha aawadood; Caasha Geelle oo la socota wafdiga ayaan xaaladda ka waraysanay.